कोल्टीमा आयुर्वेद उपचारप्रति बढ्दो आकर्षण – Health Post Nepal
कोल्टीमा आयुर्वेद उपचारप्रति बढ्दो आकर्षण
२०७७ पुष २० गते १३:०८
‘जथाभावी नथुकौं, थुकले मृत्यु फैलाउँछ’
स्वास्थ्य क्षेत्रको सूचकमा उल्लेखनीय सुधार
स्वास्थ्यमा हालसम्मकै धेरै बजेट विनियाेजन, कुन शीर्षकमा कति ? [पूर्णपाठ सहित]
पछिल्लो समय बाजुराको कोल्टीमा आयुर्वेद उपचारमा मानिसको आकर्षण बढ्दै गएको छ। कोरोना महामारीका बीच आयुर्वेदको आकर्षण देशैभर बढिरहेको अवस्थामा दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यमा असर नगर्ने भएकाले कोल्टिबासी आयुर्वेद उपचारमा आकर्षित भएका हुन्।
कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जीवनशैली कार्यक्रम अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सक डा. अच्युत शाली घिमिरे र वैद्य छत्र बम कार्यरत छन्। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मार्तडीमासमेत अभाव रहेको चिकित्सकीय सेवा यस दुर्गम भेगका जनताले पाउँदा स्थानीय हर्षित बनेकाछन्।
पछिल्ला महिनामा दैनिक ३० देखि ३५ जना बिरामी आयुर्वेद सेवाबाट लाभान्वित हुँदै आएका छन्। अम्लपित्त, प्रमेह, स्वासविकार, अतिसार, आमवात, वातरक्त, उदररोग, त्वकविकार, प्रसुतिविकार, स्त्रीरोग, जरारोग, शिरोरोगलगायतमा सेवाग्राहीले उपचार र निःशुल्क औषधि पाइराखेका छन्।
यस्तै पञ्चकर्म सेवा अन्तर्गत स्नेहन र स्वेदन सेवा पनि सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ। बाजुरा जिल्लाका दुर्गम भेग बिछ्या, रुगिन, हिमाली, धुलाचौंर र मुगुको खत्याडाबाट समेत लामो दूरी पार गरेर बिरामी आयुर्वेद सेवा लिन कोल्टी आउने गरेका छन्।
यहाँका मानिसले विस्तारै आयुर्वेदको महत्व बुझ्दै गएपछि आकर्षण बढ्दै गएको स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. राजु राज जैशीले बताए। ‘पहिला धेरै भीड एलोपेथी चिकित्सामा मात्र हुन्थ्यो। अहिले आयुर्वेद सेवा उपलब्ध हुने भएपछि दुवै चिकित्सा पद्धतिमार्फत चाप नियन्त्रण गर्न मद्दत पुगेको छ,’ उनले भने।
अझै पनि केन्द्रमा आयुर्वेद सेवालाई विस्तार गर्न सकिने तर औषधि, सामग्री र ठाउँको अभावमा गर्न नसकिएको वैद्य छत्र बमले बताए।
‘यहाँ पानी, बत्ती र सहज सडक सञ्जालको अभावमा जनताले निकै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। तर, पनि हामिले सकेजति सहज रूपमा सेवा लिइरहेका छौं’, उनले भने, ‘हामी दुवै आयुर्वेद कर्मीलाई न्यूनतम तलब बाहेक दुर्गम भत्ता तथा अन्य कुनै प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध छैन। जोखिम मोलेर सेवा दिइरहेका छौं।’ उनले घर आउनजान र कोल्टिमा बस्न मात्रै खर्चले धानिरहेको बताए।
‘मैले यहाँ आएर मानिसहरूको स्थानीय जडिबुटी र आयुर्वेद चिकित्साप्रतिको लगाव बुझ्ने मौका पाए। अब आयुर्वेद क्षेत्रको समसामयिक र अपेक्षित सुदृढीकरणका लागि देशका संघीय संरचना अनुसार स्थानीय निकायमा आयुर्वेद जनशक्ति परिचालन गर्नु जरुरी छ। मौलिक राष्ट्रिय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेदलाई नेपालको दुर्गम भेगसम्म विकास र विस्तार गर्नसके जनता निकै लाभान्वित हुनेथिए’, आयुर्वेद चिकित्सक डा.अच्युत शाली घिमिरेले भने।
Tags: आयुर्वेद उपचार, बाजुरा, स्वास्थ्य